कागती खेतीमा लागेका दुई युवा - नेपालबहस
कागती खेतीमा लागेका दुई युवा
| ११:००:०२ मा प्रकाशित
२१ जेठ,तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ विजौरीमा डेढ बिघा र घोराहीमा चार बिघा क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर दुई युवाले गरेको कागती खेती गरेका छन् । बाँझो रहेको जग्गा उनीहरुले कागती खेती गरेका हुन् । अहिले सबैतिर कागतीका बोटैबोट देखिन्छन् । बोटैपिच्छे लटरम्म फलेका मुखै रसाउने कागती । अहिले कागती खेती गरेर परिचित बनेका छन् दुई युवा।
घोराहीमा वार्षिक रु तीन हजार कठ्ठा र तुलसीपुरमा रु दुई हजार ५०० जग्गा भाडामा लिएर रुकुम घर भई हाल दाङमा बसोबास गर्दै आएका विष्णु वली र रामचन्द्र खड्काले व्यावसायिक कागती खेती गरेका हुन् । धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । तर नेपालमै पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
उनीहरुले सूर्य जैविक कृषि केन्द्र प्रालिमार्फत कागती खेती शुरु गरेको तीन वर्ष भयो । खेती शुरु गरेको डेढ वर्षदेखि आम्दानी लिन शुरु गरेका उनीहरुले वार्षिक रु १५/२० लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गरेका छन् । “डेढ वर्षदेखि हामीले आम्दानी लिन शुरु गरेका हौँ”, वलीले भने “वार्षिक रु १५/२० लाख आम्दानी हुने गरेको छ ।” कागतीको बजार माग पनि उच्च रहेकाले समयमै लगाानी उठाउन सहज हुने उनले बताए । उनका अनुसार शुरुमा आफूहरूले रु ३० लाख लगानी गरेको भए पनि अहिलेसम्म करिब रु एक करोड लगानी भइसकेको छ ।
अहिले ‘पन्त १’ कागतीको खेती भइरहेको छ । कागती अचार, जुस, जामलगायतका लागि बढी माग हुने गरेको अर्का व्यवसायी खड्काले बताए । “कागती बजारमा निकै माग छ, अहिले बजारको मागअनुसार पु¥याउन भ्याइनभ्याइ छ”, उनले भने, “बढी मात्रामा अचार, जुस, जामलगायतका लागि माग हुने गरेको छ ।”
सरकारले दाङमा कागती खेती विस्तार गर्ने भएपछि आफूहरू झनै खुशी भएको उनले बताए । यसले व्यावसायिकरूपमा कागती खेती गरिरहेका किसानलाई थप प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ । अहिले दाङका दुई स्थानमा आफूहरूले यो खेती गरेको भन्दै यसलाई विस्तार गरेर दैशभर खेती गर्ने वातावरण तयार गर्न थालिएको व्यवसायी वलीले बताए । अहिले हामी दुई छौँ, हामीले देशैभर यो खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “त्यसका लागि १०८ किसान थप गर्ने हाम्रो योजना छ ।” उनका अनुसार आफूले उत्पादन गरेको कागती देशभर पु¥याउने योजना छ ।
अहिले कागती फलाउने र बेच्ने कार्य मात्रै भएको भन्दै कागती प्रशोधन गर्ने र बजारीकरण गर्ने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले बिरुवा पनि उत्पादन गरिरहेको भन्दै आउँदो वर्ष ५० हजार बिरुवा बेच्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । एउटा बिरुवाको फुटकरमा रु २५० मा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
बाँझो जग्गामा कागती खेती गर्दै युवा ४ महिना पहिले
निर्माणाधीन आधुनिक बागलुङ बसपार्क १५ घण्टा पहिले
पहिराेको उच्च जोखिमसँगै सात घर विस्थापित १६ घण्टा पहिले
प्रभु बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड ७ दिन पहिले
विजय लघुवित्तको २३ हजार ५२९ कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा, शेयरमूल्य कति ? ७ दिन पहिले
फेरि अर्को हाइड्रोपावर कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुग्यो धितोपत्र बोर्ड ७ दिन पहिले
डेढ दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशत बढिका दरले घट्यो, अधिकांश फाइनान्स र हाइड्रो कम्पनी ५ दिन पहिले
४१ राजनीतिक दलबाट ५० हजारका दरले रकम उठाउँदै निर्वाचन आयोग ! ४ दिन पहिले
कोभिड नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह सक्रिय ४ हप्ता पहिले
अस्पतालमा घट्न सकेन कोरोना संक्रमित सङ्ख्या ३ हप्ता पहिले
उद्योग वाणिज्य संघद्धारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग २ हप्ता पहिले
आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल ४ हप्ता पहिले
आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको जाल्पा लघुवित्तको मुनाफा २३३ प्रतिशतले बढ्यो ४ दिन पहिले
आजदेखि मेलम्चीको सुरुङमा पानी हाल्न बन्द ६ दिन पहिले
काभ्रेपलाञ्चोकमा निषेधाज्ञा एक हप्ता थप १ महिना पहिले
हाइकिङ र साइक्लिङको साझा गन्तव्य बन्दै बेगनास ३ महिना पहिले
बायाँ हाते अलराउण्डर कुशलले बनाए डेब्यु खेलबाट नै विश्व कीर्तिमान १ वर्ष पहिले
दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेलगत्तै पदभार ग्रहण ! १ वर्ष पहिले